မြန်မာ အွန်လိုင်း စာဖတ်အသင်း: စာပေအလင်းခေတ် တစ်ခေတ်ဆီသို့
မြန်မာ အွန်လိုင်း စာဖတ်အသင်း
သင် စာဖတ်နေသေးသ၍ စာပေယဉ်ကျေးမှု ရှိနေဦးမည်။
လူ့ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာသည့်အလျောက် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့၊ ဒေသတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၊ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်နှင့် တစ်ပြည် ပြန်လှန်ဆက်ဆံမှု. ရင်းနှီးမှု. ကရုဏာတရားထားမှု. တရားမျှတမှု. ဖွံ့ဖြိုးမှု. လှပသော လူ့ဘောင်လောက တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင် ပံ့ပိုးနိုင်သည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည့် အသိဥာဏ် ပညာနှင့် ပြည့်စုံအောင် စာဖတ်ခြင်းသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပေသည်။ ထိုသို့ စာဖတ်သည့်အခါ မည်သည့်စာပေ အမျိုးအစားမျိုးကို ဖတ်သင့်ပါသလဲဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့မိကြပေလိမ့်မည်။ သုတစာပေ၊ ရသစာပေ ဟု ဆိုသော စာပေသည် မည်ကဲ့သို့ စာပေဖြစ်သလဲဟု ခွဲခြားနားလည်နိုင်ရန်လည်း လိုအပ်လှပေသည်။
သုတ စာပေ ဆိုသည်မှာ စာဖတ်သူ၏ ဦးနှောက်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်ပေးသော အသိ ဖြစ်သည်။ ရသစာပေ ဆိုသည်မှာ စာဖတ်သူ၏ ရင်တွင်းနှလုံးသား ထဲသို့ ဦးစွာရောက်လိမ့်မည်။ ရသစာပေသည် ဖန်တီးသည့်သူ၏ နှလုံးသားနှင့် ဖတ်သည့်သူ၏ နှလုံးသား နီးစပ်လျှင် ရင်ထဲသို့ ရောက်ပေမည်။ ထိုမှတဆင့် ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာတင် မနေပဲ ဦးနှောက်ထဲသို့ ရောက်ပြီး ခံစားသိရှိမည်.. ခံစားပြီးမှ သိသည့်အသိ တစ်ခုရမည်.။ ထိုဦးနှောက်ထဲမှ အသိက တစ်လောကလုံးကို ဖြန့်ပြီး အလင်းရောင်ပေးနိုင်သည့် ဘဝအသိမျိုးတစ်ခုကို ရပြီဆိုလျှင် အကောင်းဆုံး ရသစာပေ တစ်ခုဖြစ်မည်.။
ရသစာပေသည် ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မပြောပေ၊ နှလုံးသားထဲကို တိုက်ရိုက်ထည့်မပေးပေ.၊ စာဖတ်သူကို ခံစားခိုင်းလိမ့်မည်. ထိုသို့မခံစားရလျှင် ရသစာပေကောင်း မဟုတ်ပေ။ ရသစာပေ ကောင်း မကောင်းကို နှလုံးသားနှင့် စတိုင်းပြီး ဒိထက်ကောင်းမကောင်း ဦးနှောက်နှင့် တိုင်းမည်.။ နှလုံးသား၏ ခံစားမှုက ဦးနှောက်ကို တက်လာပြီးတော့မှ ခံစားသိဆိုသည့် အသိတစ်ခုကို ပေးလိမ့်မည်၊ တကယ်ကို ကောင်းသည့်ရသစာပေသည် ဦးနှောက်နှင့်သိသည့် ခံစားသိမှနေပြီး မိမိဘဝ တစ်လျှောက်လုံးကို သော်လည်းကောင်း၊ လောကနှင့်ဆိုင်သော အမှန်တရားကိုသော် လည်းကောင်း အလင်းတစ်ခု ပွင့်ကနဲ ထွက်သွားပေလိမ့်မည်. ထိုအရာသည် ရသစာပေ၏ အကောင်းဆုံးပေတံ တစ်ခုဖြစ်သည်.. ဆိုသည်ကို စာရေးဆရာ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုံး) ၏ ကျေးဇူးကြောင့် သိခွင့်ရခဲ့လေသည်။
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်က “ရသစာပေကောင်းတစ်ခု မည်သည်မှာ စိန်တစ်ပွင့်ကို နေရောင်လက်သလို ဖြတ်ဖြတ် ဖြတ်ဖြတ်နှင့် dimension မျိုးစုံမှာ အရောင်တွေ ထွက်နေတတ်တယ်..၊ ခံစားသည့်သူက ကြိုက်သလိုခံစားပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်” တဲ့။
ထိုသို့ လူ့လောကအတွက် အရေးပါသည့် ရသစာပေကို ကွယ်ပျောက်တော့မယောင် ပြောနေကြလေသည်။ လူသားများ ရှိနေသရွေ့ ရသစာပေ မပျောက်ပျက်နိုင်ပါ။ ခေတ်ကာလ ရွေ့လျားလာသည့်အလျောက် ရသစာပေ ရေးသားသည့် စာရေးဆရာများ နည်းပါးလာသလို အသစ်သော ရသစာပေများ နည်းလာပေသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးဆရာကြီးများ ရေးသားခဲ့သော ရသစာပေများ ကို ပြန်လည် ပုံနှိပ်သင့်ပေသည်။ ဝတ္ထုရှည် ရသစာပေများ နည်းလာသော်လည်း ဝတ္ထုတိုရသစာပေများ ထွက်ရှိနေသည်ကို တွေ့နေရလေသည်။ နှလုံးသားနှင့် ခံစားမှုများကြား သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေကြသော လူသားများအတွက် ရသစာပေကောင်းများ အစဉ်မပြတ် ပေါ်ထွက်လာမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာ မြသန်းတင့်၊ ဆရာ သော်တာဆွေ၊ စာရေးဆရာ သိန်းဖေမြင့် ရေးသားသော အရှေ့ကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာ၊ ဗန်းမောင်တင်အောင် ရေးသားသော ငသြ၊ ဘုန်းမောင်တစ်ယောက်ထဲရယ်၊ ဂျာနယ်ကျော် မမလေး ရေးသားသော သူလိုလူ၊ ရင်နင့်အောင်မွှေး၊ သွေး၊ ဆရာမ ခင်နှင်းယု၊ ဆရာမ ခင်ခင်ထူး ရေးသားသော မအိမ်ကံ၊ ဆရာမ ဂျူး ရေးသားသော ပင်လယ်နှင့်တူသောမိန်းမများ၊ ကဲ့သို့ ရသစာပေကောင်းများ ရေးသားမည့် ဆရာ ဆရာမများ ထွက်ပေါ်စေချင်ပါသည်။ ထိုစာအုပ်များ ဖတ်ပြီးသည့်အချိန်တွင် ဦးနှောက်ထဲသို့ တွေးစရာများ ရောက်လာပြီး ခေါင်းထဲသို့ ရိုက်မသွင်းပဲ ခံစားသိမှတဆင့် ဘဝအတွက် တန်ဖိုးရှိသော အလင်းရောင် တစ်ခုကိုပေးနိုင်သော ရသစာအုပ်များ ဖြစ်လေသည်။ မိမိ ဖတ်လိုက်သည့် စာပေထဲမှ အကြောင်းအရာသည် နှလုံးသားထဲသို့ စူးစိုက် နစ်ဝင်နေလျှင် တခြားသောသူများကိုပါ ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးနိုင်လေသည်။ ထိုသို့ ရသစာပေများ မပျောက်ပျက်အောင် ရေးသားရန် လူငယ်များတွင် တာဝန်ရှိပေသည်။
ထိုတာဝန်များ လက်ဝယ် ကျေပွန်စေရန် လူငယ်များ စာဖတ်ခြင်းကို မြှင့်တင်ရပေမည်။ စာဖတ်အား တဖြည်းဖြည်း အားကောင်းလာစေရန် အရေးကြီးပေသည်။ ယနေ့ ဖမ်းစားလာသည့် အိုင်တီ နည်းပညာခေတ်ကာလ တိုးတက်လာသည့်အလျောက် စာအုပ်များ ဖတ်ရှုမှု အားနည်းလာသည်ကို တွေ့နေရပေသည်။ လူငယ်အများစုမှာလည်း လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ရောက်ပြီး ပြည်ပသို့ထွက် အလုပ်လုပ်ရသည့် ဦးရေ များပြားလာသည်လည်း စာဖတ်အား နည်းလာသည့် အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ စားဝတ်နေရေးအရ ဖိစီးမှုများပြားလာသော အချိန်အခါဖြစ်၍ စာအုပ်၏ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာမှုကြောင့်လည်း စာဖတ်ချင်သည့် လူငယ်များဖြစ်ပေသည့် စီးပွားရေး အခက်အခဲကြောင့် မဖတ်ဖြစ်တော့ပေ။
ထိုအခါ စာဖတ်ခြင်း လျော့နည်းလာခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသော အခြေအနေကို လေ့လာသုံးသပ်ရပေလိမ့်မည်။ စားဝတ်နေရေး ဖိစီးမှုလျော့ပါးစေရန် စီးပွားရေး ကို ပြေလည်အောင်နှင့် ပညာရေး ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်၊ ရသစာအုပ်ဟောင်းများကို တန်ဖိုးနည်းနည်းဖြင့် အရေအတွက် များများ ထုတ်ဝေသင့်သည်။ ထိုမှတဆင့် အားလပ်ချိန်များ ရလာစေရန် ပံ့ပိုးပေးရမည်။ ကျောင်းများတွင်လည်း ရသစာပေကို စနစ်တကျ ပြဌာန်း သင်ကြားပေးသင့်သည်။ ရသစာပေဖြစ်မည့် ပင်ရင်းစကားပြေ လက်ရွေးစင်နှင့် ပင်ရင်းကဗျာ လက်ရွေးစင် တို့ကို အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း တွင် သေချာစွာ သင်ကြားပေးသင့်သည်။ လူအများဖတ်နိုင်သည့် မဂ္ဂဇင်းများတွင် ရသဝတ္ထုများကို ထည့်ပေးခြင်းသည် လည်း စာဖတ်အား တိုးလာနိုင်ပေသည်။ သတင်းစာများတွင် ရသစာပေ ဝတ္ထုရှည် များကို အလျဉ်းသင့်သလို ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြသင့်ပေသည်။ ကာတွန်း နှင့် ရုပ်ပြသရုပ်ဖေါ်များနှင့်လည်း ရသဝတ္ထုကြီးများကို ပြန်လည် ဖေါ်ထုတ်သင့်ပေသည်။ ရသစာပေ ပျောက်ကွယ်မည်ဟု ထင်မြင်နေသည်မှာ မမှန်ကန်နိုင်သည်ကို ရသစာပေ ရေးသားနေသော စာရေးဆရာများက သက်သေပြနေကြပေသည်။
လူငယ်များ စာဖတ်ခြင်း အားနည်းလာသည်မှာ မဖတ်ချင်လို့ မဖတ်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပဲ သူတို့၏ လက်ရှိဘဝသည် စာဖတ်ခြင်းမှ မောင်းထုတ်ထားခြင်းကို ခံနေရသည်လည်း ဖြစ်နိုင်လေသည်။ အဓိက အချက်ကတော့ စီးပွားရေး အကြောင်းအချက်ပဲ ဖြစ်ပေမည်။ စီးပွားရေးအရ စိတ်ဖိစီးမှု မဖြစ်လျှင် ဝါသနာ ပါသော လူငယ်များ အများအပြားသည် တာဝန်ကျေပွန်နိုင်သော ခေတ်လူငယ်များ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ပြောနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယနေ့ခေတ်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ပြီး ဆီလျော်သော ရသဝတ္ထုများ ပြန်လည် ပုံနှိပ်ခြင်းမှ စတင်သင့်ပါသည်။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏ လူဦးရေနှင့် ထုတ်ဝေသော စာအုပ်အရေအတွက်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျင် စာဖတ်ခြင်းသည် အဆပေါင်းများစွာ အားနည်း ဆုတ်ယုတ်နေသည်ကို တွေ့ရှိနေရသည်။
စာဖတ်အား မြှင့်တင်ရန် ရသစာပေ ပြန်လည်အားကောင်းလာစေရန် စီးပွားရေးမှ စ၍ ပညာရေး ပိုင်းများကို စနစ်တကျ စတင် လုပ်ကိုင်သင့်ပေသည်။ စာများများ ဖတ်လာနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်သော အရာများကို တတ်နိုင်သရွေ့ ကြိုးပမ်းရပေမည်။ စာကြည့်တိုက်များမှလည်း စာအုပ်ကောင်းများ ထားရှိ၍ လူငယ်လူရွယ်များ အဆင်ပြေစွာ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အားထုတ်ပေးရလိမ့်မည်။
လူငယ်များ စာဖတ်အားမြင့်လာစေရန်၊ ဖတ်လိုက်သည့် စာပေတစ်ခု၏ အနှစ်သာရကို သေချာလေ့လာသည့် အလေ့အကျင့် ရလာစေရန်၊ ရသစာပေ အားကောင်းရေးနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားပြန့်ပွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မြန်မာအွန်လိုင်း စာဖတ်အသင်းကို တည်ထောင်ပြီး ထိုမှတဆင့် လစဉ် (သို့မဟုတ်) အပတ်စဉ် ရွေးချယ်ထားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို စာဖတ်သူအား ဖတ်ရှူစေပြီးလျှင် စာဖတ်သူဘက်မှ ပြန်လည်ပေးပို့လာသော ထိုစာအုပ်နှင့် ပက်သက်သည့် သုံးသပ်ချက်များ၊ ရှုထောင့်အမြင်များကို ကျွန်မတို့ အွန်လိုင်း စာဖတ်အသင်းမှ ပြန်လည် ဖေါ်ပြပေးသည့် အစီအစဉ်များကို အဓိက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ. နှစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ Volunteer အဖြစ် ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမည့်သူများမှ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်သည့်အပေါ်တွင် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စီ ရေးပြီး သုံးသပ်စေချင်ပါသည်။ စာဖတ်အသင်းမှ ရွေးခြယ်လိုက်သော စာအုပ် မိမိတွင် ရှိနေလျှင် ထိုအပတ်တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီး သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
အခြား စာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပက်သက်သော အစီအစဉ်များကိုလည်း မြန်မာ အွန်လိုင်းစာဖတ်အသင်းမှ အလျဉ်းသင့်သလို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သဒ္ဓါလှိုင်း February 16, 2013 at 12:39 AM
ခုအစီအစဉ်လေးမှာ ပါဝင်အားဖြည့်ပေးဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်....
မြသွေးနီ February 8, 2013 at 12:39 AM
စာချစ်သူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပါ။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ စာဖတ်လိုစိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် မည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို ၀မ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုလျှက်ပါ..
သဒ္ဓါလှိုင်း February 8, 2013 at 9:51 AM
မမ တို့ အကူအညီတွေ အများကြီးလိုပါတယ်နော်။။ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီလမ်းညွန်ပေးဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် မမမြသွေး...........
Anonymous February 8, 2013 at 5:18 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....မြန်မာအွန်လိုင်းစာဖတ်အသင်းကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အစ်မ သဒ္ဓါလှိုင်းရေ....
စာပေအလင်းခေတ် တစ်ခေတ်ဆီသို့ ဖတ်ရခြင်းဖြင့် ရသစာပေ အနှစ်သာကို သိရှိရပါတယ်။ ကျွန်မလည်း စာဖတ်ဖို့ဝါသနာပါပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် မည်သည့်စာအုပ်မျိုးအားအဓိကဖတ်သင့်ကြောင်းမသိရခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် နောင်များ လူငယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် စာဖတ်အား ပိုမိုတိုးပွားရန်မြှင့်တင်သွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။ လူငယ်များ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် စာဖတ်အား လျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှုထောင့်အနည်းငယ်မှ ထောက်ပြသောကြောင့်လည်းဗဟုသုတရပါတယ်...
သဒ္ဓါလှိုင်း February 8, 2013 at 9:54 AM
စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ညီမအနေနဲ့လည်း ပါဝင်အားဖြည့်ပြီး တစ်ဘက်တစ်လမ်းကနေ စာပေထွန်းကားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်..
ကိုယ်တိုင်က ရသစာပေတွေကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဖတ်နေဆဲလူတစ်ယောက်မို့ သဘောတကျ ဖတ်သွားပါတယ်မသဒ္ဓါ...။
(ကိုဏီ့ရဲ့ ဆိုဒ်က ကော်နက်ရှင်ကြောင့်လားမသိပဲ ခဏခဏ ၀င်မရဖြစ်နေလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖေ့ဘမှာ တက်ဂ်ပေးစေချင်ပါရဲ့ဗျာ)
သဒ္ဓါလှိုင်း February 16, 2013 at 12:36 AM
ကိုဏီလင်းလည်း အကြံပေးပါအုံး. တတ်နိုင်သလောက်လည်း ကူညီပေးနော်.
ခုအစီအစဉ်လေးမှာလည်း အမြဲပါဝင်အားဖြည့်ပေးဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်....
မြန်မာအွန်လိုင်းစာဖတ်အသင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၇.၂.၂၀၁၂ နေ့မှစတင်၍ အွန်လိုင်းပေါ်မှ စာဖတ်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ တည်ထောင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှ စာဖတ်သူ အရေအတွက် များပြားလာရေး၊ စာအုပ်တစ်အုပ်၏ အနှစ်သာရကို စနစ်ကျနစွာ လေ့လာဖတ်ရှုလိုသည့် အလေ့အကျင့် ရရှိလာရေး၊ ရသစာပေ အားကောင်းရေးနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး၊ တို့ကို မြန်မာ အွန်လိုင်းစာဖတ်အသင်းမှ ရှေးရှုသွားမည် ဖြစ်သည်။
စာအုပ် သုံးသပ်ချက် အပါတ်စဉ် (၁)၊ မင်းလူ - လမ်းဖြတ်ကူးသော ဝတ္ထုတိုများ
မြန်မာအွန်လိုင်း စာဖတ်အသင်း (2)
Copyright © 2012 မြန်မာ အွန်လိုင်း စာဖတ်အသင်း and Blogger Themes.